को’रोना महा’मारीकै बेला निजी अस्पताल भने क’माउ ध’न्दामा : – Sadhaiko Khabar
को’रोना महा’मारीकै बेला निजी अस्पताल भने क’माउ ध’न्दामा :
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८ समय: ९:२१:२०
काठमाडाैं/ देश कोरोना महा’मारीको उत्क’र्षमा छ । सरकारी अस्पतालमा बे’ड नपाएर बिरामी सडकमा अक्सि’जन सिलिन्डर जोडेर समेत सुता’इएका छन् । अर्कातिर केही निजी अस्पताल भने यही महा’विपत्तिलाई क’माउ ध’न्दामा उपयोग गरिरहेका छन् ।
ह्याम्स अस्पतालले बिरामीका लागि बनाएको शुल्कको सूचीसहितको ‘मञ्जुरी’नामा’ को सर्वत्र टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। को’भिडका बिरामीका लागि एकै दिनको एउटा क्या’बिनको ५० हजार रुपैयाँ उक्त अस्पतालले तोकेको छ।
सरकारले कोभि’डका बि’रामीको उपचार गरेबापत अस्पताललाई शुल्क तिर्छ । निजी अस्पतालको खर्च बढी हुने भएकाले सरकारद्वारा निर्धारित शुल्कमा ५० प्रतिशत थपेर लिन सकिने छुट दिइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा कोभिड–१९ के’यर सञ्चालन सम्झौ’तामा संक्र’मितको उपचार व्यवस्था’पनमा लाग्ने खर्च सामान्य उपचारका लागि ३ हजार ५ सय, मध्यम उपचारका लागि ७ हजार र गम्भीर उपचार (भेन्टि’लेटर) का लागि १५ हजार प्रतिबिरामी प्रतिदिन तय गरिएको छ । डा. गौतमका अनुसार त्यो रकम सरकारले प्रत्येक महिना अस्पतालको दा’बी बमोजिम शोधभर्ना भुक्तानी गर्छ ।
ह्याम्सले साधारण वा’र्डकै ७ हजार तोकेको छ । उसले आई’सीयू बे’डको शुल्क २२ हजार राखेको छ । सरकारले आई’सीयू सहितको बे’डको शुल्क ७ हजार मात्रै लिनु भनेको छ। आइ’सोलेसन प्राइभेट रूमको २१ हजार, डिलक्सको २६ हजार र स्विटको ५० हजार रुपैयाँ शुल्क राखिएको छ ।
त्यति मात्र होइन, डाक्टरको शुल्क प्रतिभिजिट १५ सय रुपैयाँ राखिएको छ । नर्सिङ शुल्क त्यसमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने भनिएको छ । तर, कति भनेर खुलाइएको छैन ।
यति महँगो शुल्कमा ‘स्विट’ मा बस्ने बिरामीले खानाको शुल्क छुट्टै तिर्नु’पर्ने छ । यो ख’बर आ’जको अन्नपूर्ण पो’स्ट दैनि’कमा छापि’एको छ ।